> Resource > Free > Top 5 Free AVI Video Editors
Maalmahan qalab kala duwan video tafatirka xirfadeed kaas oo ku siin saamaynta la yaab leh iyo awoodaha jira ee lagu iibiyo suuqa. Laakiin qalabka video tafatirka u noqon karaan qaali ah oo aan aad u user-friendly. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel qaar ka mid ah filimada guriga, barnaamijyada kuwa aan doono mid wax tar aad u. Dhab ahaantii, waxaan dooran kartaa software xorta ah oo fudud video tafatirka. Halkan Siiyay Goolhaye Iker Casillas aan 5 AVI free software video tafatirka sare.
Windows Movie Samee
Windows Movie Uumahaaga qalab tafatirka weyn free video dadka isticmaala Windows. Waa awoodaan in ay la tacaalaan qaabab video kala duwan sida AVI, MOV, MP4, M4V, wmv iyo in ka badan. Waxaa ku jira qaababka sida shaqeynta jiitaa-n-dhibic, kala guurka, horyaal, credits, Sheeko waqtiga iyo in ka badan. Waxa kale oo aad xitaa ka beddeli kartaa saamaynta jira haddii aad leedahay aqoon ku saabsan isticmaalka code XML.
Avidemux waa barnaamij video tafatirka aasaasiga ah weli mid aad u awood. Waxa ay taageertaa qaabab video kala duwan sida AVI, MPEG, MP4 iyo ASF. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u splice kartaa video clips ama ku dar sida diirada. In kasta oo ay taasi u muuqan kartaa mid fudud aad u kacsan, waxaa dhab u adag oo ku filan si loo hubiyo in aad videos eegi xirfadeed.
Virtualdub waa si fiican u ogaada qalab video tafatir oo kuu ogolaanaya in aad si aad u qabato video oo wuxuu oofin video tafatirka. Waxaa ku jahaysan files AVI processing iyo awoodaan inay sameeyaan noocyo kala duwan oo hawlaha ka hor iyo ka dib processing aad video on. Sidaa daraadeed, aad qabsato karaa heerka jir ah, ka saar kuwan raadkaygay audio, resize, isku shaandheyn, dhajisan, ee dhalaalka iyo duwan iyo in ka badan qabsato.
Lightworks waa video editor free laakiin xamili karo inta badan waxa aad ka filan lahaa ka codsi video tafatirka xirfadeed. Waxa ay taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabab video sida AVI, MOV, Mpg iyo in ka badan. Qaar ka mid ah qaababka ay u fiican waxaa ka mid ah qabashada iyo video dejinta, GPU- dardargalinta saameynta waqtiga dhabta ah, la saxo midabka, autosave iyo maamulka medoa, ECT.
ZS4 Video Editor waa aalad kale oo tafatir video free iyadoo in ka badan 150 dhisay-in video saamaynta ay ku jiraan midab fiican iyo keying chroma. Users astaysto balladhka iyo height of video wax soo saarka, ku dar kuwan raadkaygay aan xad lahayn iyo-darka sub, saamaynta addoon iyo isbedelka, ka koobanahay gacanta ku noocyo ruxruxo audio iyo in ka badan.
Haddii aad rabto in aad awood dheeraad ah oo weli qalab video tafatirka fududahay in la isticmaalo, codsiga video tafatirka ganacsiga sida Wondershare ka Video Editor si weyn lagu talinayaa. Waxay leedahay labadaba versions Windows iyo Mac kaas oo kaa caawinaya in aad xaalkaa oo dhan caadiga ah qaabab video la wadaagto caalamka oo dhan ah. Halkan waxa aad kala soo bixi kartaa oo ay tijaabiyaan.